मिडियामा दलितमाथिको संरचनागत विभेद कायमै — JagaranMedia.Com
प्रकाशित : २०७८/८/६ गते
‘दलित समुदाय चार हजार वर्षदेखि उत्पीडनमा छ, यसको मुक्ति यति सहजै सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । हरेक दलितसँग अलग–अलग कथा छन्, त्यस्ता कथाव्यथा बाहिर ल्याइनुपर्छ । तपाईहरूको कलमले दलितका त्यस्ता कथाव्यथालाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’अध्यक्ष विश्वकर्माले नेपालमा संविधान र कानूनले जातीय विभेद र छुवाछुतलाई निषेध गरे पनि समाजमा अझै त्यस्तो विभेद व्याप्त भएकोमा दुःख व्यक्त गरे । ‘समाजका बुज्रुक नै यो एकैपटक परिवर्तन हुदैन, क्रमश हुन्छ भन्ने गर्छन् । तर, त्यो विस्तार भनेको कहिले हो ? यो मानसिकतालाई हामीले कसरी फेर्ने ? यसबारे आमसञ्चार माध्यमले धारणा बनाउनुपर्छ,’ अध्यक्ष विश्वकर्माले भने । उनले पछिल्ला वर्षमा दलित समुदायले विभिन्न अधिकार पाए पनि दलितमाथि हुने हिंसा भने बढ्दै गएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराए ।
‘अहिले पनि हामी जातीय हिंसा सहिरहेका छौँ । त्यो पत्रकारले होस्, वा नेताले होस् । आमरुपमा हाम्रो भोगाई उही छ,’ उनले भने, ‘मिडिया पनि त्यो समाजभन्दा अलग छैनन् । मिडियामा त्यस्तै हालत छ ।’ उनले सञ्चार माध्यममा अप्रत्यक्षरुपमा दलित पत्रकारमाथि विभेद हुने गरेको बताए ।
राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका महासचिव लक्ष्मण दर्नालले सञ्चारको क्षेत्रमा इतिहासमा कटुवाल प्रथादेखि हालसम्म दलितहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुँदा पनि त्यसको कदर हुन नसकेको बताए । ‘पत्रकारिताको इतिहासमा कटुवाल प्रथाको योगदान छ । गन्धर्वहरूले गरेको मिसन पत्रकारितालाई पनि हाम्रो इतिहासले न्याय गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने । महासचिव दर्नालले दलित समुदायका पत्रकारहरूको संख्या कम रहेको भन्दै उनीहरूलाई पत्रकारितामा आकर्षण गर्ने र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।